အေးမွဖွူရဲ့ အဓိက အားနညျးခကျြကို ထုတျဖျောပွောကွားလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျ ဇျောဇျောအောငျ – Askstyle
အေးမွဖွူရဲ့ အဓိက အားနညျးခကျြကို ထုတျဖျောပွောကွားလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျ ဇျောဇျောအောငျ
မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ လေးပတ်မြောက် ရလာဒ် စာရင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ပရိတ်သတ်အားလုံး အံ့သြခဲ့ကြရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဆိုတော် ၊ အသံကောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ အားလုံး ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ရတဲ့သူတွေထဲမှာ အားလုံးက ချစ်ခင်ကြတဲ့ အေးမြဖြူတစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်လိုက်တော့မှ ပရိသတ်တွေက SMS Voting နဲ့ ပြန်ပြီး SAVE ကြမှာ ကို စီးပွားရေးသမားတွေက သိကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် စီးပွားရေးအတွက် လှည့်ကွက်လေးတစ်ခုပါပဲ။ဒါဟာ ဘာလဲဆိုတော့ “နှလုံးသားကို ကိုင်ညှစ်လိုက်ရင် ဘာထွက်မလဲ”ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါပဲနော်။ဆရာဝန် ကတော့…. သွေးထွက်မယ်လို့ ဖြေမှာ ဖြစ်သလို ကဗျာဆရာကတော့ …. မျက်ရည်တွေ ထွက်တယ်လို့ ဖြေမှာပါ စီးပွားရေးသမား ကတော့… ငွေထွက်တယ်လို့ ဖြေဆိုပါလိမ့်မယ်နော်။
ဒါပေမယ့် အခုလို လူကောင်းတွေ ထိုင်ခုံထိုင်ရတာကြောင့် ပရိသတ်များက စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသလို ၊ ဝေဖန်မှုတွေလည်း မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီအထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဇော်ဇော်အောင် တစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူဟာလည်း ပြိုင်ပွဲဝင်အေးမြဖြူရဲ့ Fans တစ်ယောက်ပဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြိးတော့ ဘာကြောင့် အေးမြဖြူ Bottom3မှာ ထိုင်ရလဲ ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့အမြင်လေးကို အခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။
“သို့ သမီးလေး အေးမြဖြူညည်းမှာသူများတွေလို ဒရမ်မာ ဇာတ်လေးဘာလေးမရှိဘူးနော် အရိုးရှင်းဆုံးအဖြူစင်ဆုံးစိတ်ထားလေးနဲ့အသပိုင်အဆိုပိုင် တာလေးပဲရှိတာ အန်ကယ် သာရှိရင်ရိုးဂုဏ်နဲ့သမီးလေးကရောင်စဉ်တွေဖြာပြီးဘိုးတော်တွေမယ်တော်ေ တွစောင့်ရှောက်မှာ လို့ပြောမှာမြင်ယောင်သေး အောင်မြင်မှာပါသမီး မာယာတောမှာခနမျောပါ၊အန်ကယ်ဘဘဇော်” ဆိုပြီးရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အခုလို အေးမြဖြူ Bottom3မှ ထိုင်လိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းတဲ့ ပရိသတ်တွေက နောက် အပတ်အတွက် အေးမြဖြူကို SMS Voting ပေးကြမှာ အသေအချာပါ။ လက်ရှိမှာ အားလုံးကတော့ အေးမြဖြူတစ်ယောက် Winner ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မှန်းဆနေကြပါတယ်။
CRD– SMT( Shwe Yaung Lan)
မွနျမာအိုငျဒေါရဲ့ လေးပတျမွောကျ ရလာဒျ စာရငျးထှကျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ ပရိတျသတျအားလုံး အံ့သွခဲ့ကွရပါတယျ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အဆိုတျော ၊ အသံကောငျးတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျတှေ အားလုံး ထိုငျခုံမှာ ထိုငျရတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ထိုငျရတဲ့သူတှထေဲမှာ အားလုံးက ခဈြခငျကွတဲ့ အေးမွဖွူတဈယောကျလညျး အပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျ။အားလုံးထိုငျခုံပျေါထိုငျလိုကျတော့မှ ပရိသတျတှကေ SMS Voting နဲ့ ပွနျပွီး SAVE ကွမှာ ကို စီးပှားရေးသမားတှကေ သိကွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ စီးပှားရေးအတှကျ လှညျ့ကှကျလေးတဈခုပါပဲ။ဒါဟာ ဘာလဲဆိုတော့ “နှလုံးသားကို ကိုငျညှဈလိုကျရငျ ဘာထှကျမလဲ”ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတဈခုပါပဲနျော။ဆရာဝနျ ကတော့…. သှေးထှကျမယျလို့ ဖွမှော ဖွဈသလို ကဗြာဆရာကတော့ …. မကျြရညျတှေ ထှကျတယျလို့ ဖွမှောပါ စီးပှားရေးသမား ကတော့… ငှထှေကျတယျလို့ ဖွဆေိုပါလိမျ့မယျနျော။
ဒါပမေယျ့ အခုလို လူကောငျးတှေ ထိုငျခုံထိုငျရတာကွောငျ့ ပရိသတျမြားက စိတျမကောငျးဖွဈကွသလို ၊ ဝဖေနျမှုတှလေညျး မွငျ့တကျနပေါတယျ။ဒီအထဲမှာ သရုပျဆောငျဇျောဇျောအောငျ တဈယောကျလညျးအပါအဝငျဖွဈပါတယျနျော။ သူဟာလညျး ပွိုငျပှဲဝငျအေးမွဖွူရဲ့ Fans တဈယောကျပဲဆိုတာ ထုတျဖျောပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ပွိးတော့ ဘာကွောငျ့ အေးမွဖွူ Bottom3မှာ ထိုငျရလဲ ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့အမွငျလေးကို အခုလိုပဲပွောပွလာပါတယျ။
“သို့ သမီးလေး အေးမွဖွူညညျးမှာသူမြားတှလေို ဒရမျမာ ဇာတျလေးဘာလေးမရှိဘူးနျော အရိုးရှငျးဆုံးအဖွူစငျဆုံးစိတျထားလေးနဲ့အသပိုငျအဆိုပိုငျ တာလေးပဲရှိတာ အနျကယျ သာရှိရငျရိုးဂုဏျနဲ့သမီးလေးကရောငျစဉျတှဖွောပွီးဘိုးတျောတှမေယျတျောေ တှစောငျ့ရှောကျမှာ လို့ပွောမှာမွငျယောငျသေး အောငျမွငျမှာပါသမီး မာယာတောမှာခနမြောပါ၊အနျကယျဘဘဇျော” ဆိုပွီးရေးသားထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
အခုလို အေးမွဖွူ Bottom3မှ ထိုငျလိုကျရလို့ စိတျမကောငျးတဲ့ ပရိသတျတှကေ နောကျ အပတျအတှကျ အေးမွဖွူကို SMS Voting ပေးကွမှာ အသအေခြာပါ။ လကျရှိမှာ အားလုံးကတော့ အေးမွဖွူတဈယောကျ Winner ဖွဈလိမျ့မယျလို့ မှနျးဆနကွေပါတယျ။